Kuhle 2-igumbi-apt. ngombono kunye nedama lokuqubha
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguAlan
Ukusuka kwi-balcony enkulu okanye i-terrace unombono ophefumulayo weentaba ezijikelezileyo kunye ne-UNESCO Natural Park. Indlu yethu ibekwe kwindawo yokuhlala kufuphi ne-ski slopes ebusika kwaye kwindawo yokuqala yobuchule bokuhamba kunye nohambo lwebhayisekile ukukhanya ukuya nobunzima obuphakathi ehlotyeni.
Umntu uya kuhlala ekhona kwimibuzo yakho kwindawo yolwamkelo.
Amafulethi axhotyiswe nge-WIFI ekhawulezayo yokufikelela, umnxeba, iTV yesathelayithi kunye nomqondiso weSky kwiidekhowuda ezizisele ngokwazo, isefu, ibalcony okanye iterrace. Ukongeza, indlu nganye inegumbi layo lokuhlambela elineshawa kunye/okanye ibhafu, indlu yangasese, isomisi seenwele kunye nesinki ephindwe kabini. Sinikezela ngelinen yelinen, iitawuli ezincinci nezinkulu kunye nekhitshi ekhitshini labucala. Iitawuli ziya kutshintshwa kabini ngeveki kwaye ukucocwa kokugqibela ekuphumeni kubandakanyiwe kwixabiso. Amakhitshi ethu axhotyiswe ngeoveni yemicrowave, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu seceramic yombane, i-exhaust hood, umatshini wekofu waseJamani nowaseTaliyane kunye nefriji enendawo yokukhenkcisa. Uya kufumana neepani, iimbiza, izitya kunye namalaphu etafile alahlwayo ekhitshini.
Amagumbi axhotyiswe ngesitayela sealpine, aneparquet kunye/okanye imigangatho ekhaphethiweyo, ibhedi enye okanye kabini yokutsalwa kwesofa, itafile yokutyela ukuya kuthi ga kwi-6 yabantu.
Iindwendwe zethu zikhetha indawo yethu eSelva di Val Gardena, njengoko iyindawo ezolileyo kakhulu emiliselwe kwindalo.
Indawo yokuhlala imalunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwelona thambeka likufutshane, kwaye ngeenyanga zasebusika, igumbi lokutyibiliza elishushu elinesomisi se-ski boot liyafumaneka. Ehlotyeni, sikwindawo efanelekileyo yohambo ngeenyawo okanye ngebhayisekile, esinokuhlanjwa size sipakwe kwindawo evaliweyo.
Kwi-reception, umntu uya kuhlala ekhona kwimibuzo kunye neemfuno zakho. Kwakhona ngeengcebiso kunye nolwazi oluthe kratya, siya kukuvuyela ukuba nawe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Selva